Iyi People kuverenga kamera ndiyo yedu nyeredzi chigadzirwa. Iyo yakaiswa paShanghai Pudong International Airport. Yakabvunzurudzwa zvakare neShanghai TV uye yakarumbidzwa sehunyanzvi hwevatema, heino vhidhiyo renhau.
Vazhinji vedu Vanhu vanoverenga kamerazviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedu Vanhu vanoverenga kamera.
HPC008 Vanhu vanoverenga kamera yakafanana neHikvision Vanhu vanoverenga kamera, asi MRB Vanhu vanoverenga kamera ine mikana yakasiyana kubva kuHikvision Vanhu vanoverenga kamera. Iyo inoshandisa vhidhiyo-yakavakirwa yevatakuri yekuyerera manhamba sisitimu kuti iite yakajeka manhamba ekuongorora pane shopu data data, iyo inogona kunyatso kuverenga zvitoro. Ruzivo senge huwandu hwevanhu vanopinda uye vanobuda pamusuwo wega uye nekwaiyerera kuyerera kwevanhu kune hunhu hwekuchinja kwakasimba, kurongeka kwepamusoro uye nemitengo yakaderera yekushandisa. Iyo ine simba mutakurwi kuyerera kwehuwandu hwehuwandu hwekuongorora uye manejimendi basa rinogona kupa gumi nemimwe mishumo yevatengi, uye Kubatanidza neyechitatu-bato software masystem ekupa vanoita zvisarudzo neruzivo rwesainzi rwe data. Kusiyana neHikvisionVanhu vanoverenga kamera, MRB Vanhu vanoverenga kameraine matekinoroji mana epakati, ekuti chinhu chekutevera tekinoroji, tekinoroji yekuongorora kwezvakatipoteredza, tekinoroji yekuona kwevanhu, uye tekinoroji yekugadzira tekinoroji. Kubudikidza nekuongororwa kweyekufambisa data data pamusuwo nekubuda kwenzvimbo imwe neimwe, inzvimbo inonzwisisika, Kurongwa kweSainzi uye zvivimbiso zvekuchengetedza zvinopa hwaro hwakavimbika. Maawa ebhizinesi anonzwisisika anogona kumisikidzwa zvinoenderana necustomer traffic, uye huwandu hwevanhu hunogona kuiswa pasi pemamiriro akakosha kuti vabatanidzwe nekubatana kwealam. MRB Vanhu vanoverenga kamera iri kunyanya yezvitoro uye yekutengesa Ipa rutsigiro rwekutsigira sevhisi yezvitoro, zvinokwezva veruzhinji, dzimba dzekuratidzira, zvifambiso zvevoruzhinji nenzvimbo dzakazara.
Iko kushanda kwe HPC008 Vanhu vanoverenga kamera
1. Iyo data yakawanikwa ne Vanhu vanoverenga kamera inosanganiswa nekutengesa, uye ipapo mutengo wekutenga unogona kuverengerwa.
2. Nzira mbiri-dzevapfuuri dzinoyerera zvinonyatso kuverengerwa, iyo yakazara yevatakurwi kuyerera kunoverengwa, chiyero chakasangana uye chinhambwe chakafara.
3. Real-nguva ziva huwandu hwevanhu pane yega koridho pasi kuburikidza neHPC008 Vanhu vanoverenga kamera.
4. Shanduko mune yemukati yevatakuri kuyerera kwechitoro uye avhareji yemutyairi kuyerera.
5. Avhareji yekugara nguva yevashanyi.
6. Iyo data yevatakuri yekuyerera inounganidzwa neHPC008 Vanhu vanoverenga kamera inozocherwa zvakadzama, uye ipapo iyo data ichabatanidzwa uye kuongororwa.
7.Mupfumi mutakurwi kuyerera data mushumo, intuitive uye dzakasiyana mhando.
8. Mushure mekuisa iyo HPC008 Vanhu vanoverenga kamera munzvimbo yega yega yechitoro, unogona kuverenga mutakurwi wekuyerera muchitoro, ongorora data kubva kumakona mazhinji, uye ongorora mafambiro ekufambisa kwevatakurwi.
9. Verenga huwandu hwevanhu vakasiyiwa munzvimbo.
10. Iyo software yeHPC008 Vanhu vanoverenga kamera inogona kudzora kugara.
Iyo yakakosha kukwirira, yakarairwa kusarudza hombe lens
Iyi bvunzo mhedzisiro yakavakirwa pavanhu vepakati 1.7M
Inobata upamhi kuona 2M
MRB vanhu vanoverenga kamera HPC008 vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze Vanhu vanoverenga kamera, 2D, 3D, AI Vanhu vanoverenga kamera, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo Vanhu vanoverenga kamera zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB musoro kuverenga kamera HPC010